Akora malaza, Microencapsulation, Support Immune - Finutra
Finutra dia nanolo-tena ho mpamatsy vola ho an'ny rojom-pamokarana manerantany, manolotra karazana akora betsaka sy akora ilaina amin'ny maha mpanamboatra, mpizara sy mpamatsy ho an'ny zava-pisotro eraky ny zava-pisotro eran-tany izahay, ny sakafo ara-tsakafo, ny sakafo, ny sakafo ary ny indostrian'ny cosmeceutika. Ny kalitao, ny fampiharana ary ny fitadiavana dia ny andry manohana ny fototry ny rafitray sy ny tanjontsika. Manomboka amin'ny drafitra ka hatramin'ny fanatanterahana, fanaraha-maso, fanidiana ary fanamarihana, ny fizotrantsika dia voafaritra mazava tsara eo ambanin'ny fenitra indostrialy ambony.
Manana ekipa teknika matanjaka ao amin'ny indostria isika, traikefa matihanina am-polony taona maro, haavo famolavolana tena tsara, mamorona fitaovana avo lenta avo lenta avo lenta.
Ny vokatra asongadinay
5-HTP 99% tampoka X maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana
Ny turmeric Root dia mamoaka vovoka curcumin
Ny asan'ny famokarana dia aseptika mifanaraka amin'ny fenitra GMP. Ny laboratoara fanandramana afovoany dia ampiarahina amin'ny fitrohana atomika, dingana entona ary dingana ranoka. Ireo teboka fanaraha-maso kritika dia notsapaina tamin'ny teboka voafetra ary nalaina santionany, noho izany, mba hahazoana antoka fa mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa ny andian'ny vokatra tsirairay. Amin'ny famokarana sy ny asa, Finuta dia manaraka hatrany ny foto-kevitra "fanatsarana ny tontolo voajanahary sy ny fahasalaman'ny olombelona", mifehy fatratra ny kalitao ary miezaka manome vokatra sy serivisy tsara kokoa ho an'ireo mpamatsy manerantany.
Tribulus terrestris (an'ny fianakaviana Zygophyllaceae) dia zava-maniry mandady isan-taona miparitaka any Shina, atsinanan'i Azia ary mipaka hatrany Azia andrefana sy atsimon'i Eropa. Ny voan'ity zavamaniry ity dia nampiasaina tamin'ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa ho an'ny fitsaboana aretin-tsaina, edema, fikolokoloana ny kibo, tosi-dra avo, ary aretim-po raha ny any India dia ny fampiasana azy any Ayurveda ho an'ny tsy fahampiana, tsy fahazotoan-komana, jaundice, aretina urogenital, ary aretim-po kardia. Tr ...
Valeriana officinalis dia zavamaniry iray, izay antsoina matetika hoe valerian. Araka ny lovantsofina, ny fakany valerian dia namboarina ho dite na hohanina ho an'ny fialan-tsasatra sy fikorontanana. Valerian dia heverina fa manatsara ny famantarana ny iray amin'ireo neurotransmitters sedative lehibe, gamma-aminobutyric acid (GABA). Ny fampiasana voalohany an'i Valerian dia ny hampitony ny fanahiana na hanamorana ny torimaso. Anaran'ny vokatra: Valerian Extract Source: Valerian Officinalis L. Fizarana efa niasa: Solvent nalaina solika: rano & ...
L-Theanine dia asidra amine izay hita amin'ny karazana zavamaniry sy holatra isan-karazany, ary be indrindra amin'ny dite maitso. Ny L-Theanine dia matetika antsoina hoe Theanine tsotra, fa tsy afangaro amin'ny D-Theanine. L-Theanine dia manana mombamomba ny tsiro mamy sy mamy tsy manam-paharoa ary matetika ampiasaina hampihenana ny mangidy amin'ny sakafo sasany. Tombontsoa L-Theanine Ny L-Theanine dia mety hisy vokany mampitony ny fihetseham-po sy ny torimaso ary mety hanohana ny fiasan'ny ati-doha sy ny fanairana, ny fifantohana, ny fahalalana ary ny fahatsiarovana ...
Diosmin dia simika amin'ny zavamaniry sasany. Amin'ny voankazo voasary no tena ahitana azy. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany amin'ny lalan-dra ao anatin'izany ny hemorrhoids, ny lalan-drà amin'ny lalan-drà, ny fivezivezena malemy amin'ny tongotra (stasis amin'ny lalan-drà), ary ny rà mandriaka (hemorrhage) amin'ny maso na siligaoma. Matetika izy io dia raisina miaraka amina hesperidin. Anaran'ny vokatra: Diosmin Loharano: Citrus Aurantium L. Ampahany nampiasaina: Solvent nalaina avy amin'ny voankazo tsy ampy taona: Ethanol & Water Non GMO, BSE / TSE Non Irridiation maimaim-poana, Allergen F ...
Fiandohana: Centella asiatica L. Total Triterpenes 40% 70% 80% 95% Asiaticoside 10% -90% / Asiatic Acid 95% Madecassoside 80% 90% 95% / Madecassic Acid 95% Fampidirana: Centella Asiatica, fantatra amin'ny anarana hoe pennywort Asiatic na Gotu kola, dia zavamaniry mandavantaona sy malefaka maniry amin'ny tany mando any Azia. Izy io dia ampiasaina ho toy ny legioma mahandro ary toy ny ahitra fanafody. Centella asiatica dia fantatra amin'ny ankapobeny ho famenon-tsaina manatsara ny kognita miaraka amin'ny tombony fanampiny ho an'ny fahasalaman'ny kardia (ao ...
Huperzine-A dia fitambarana nalaina avy amin'ny zavamaniry ao amin'ny fianakaviana Huperziceae. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe inhibitor acetylcholinesterase, izay midika fa mijanona ny anzima tsy hanapotehana acetylcholine izay miteraka fitomboan'ny acetylcholine. Ny Huperzine-A dia toa singa azo antoka amin'ny fandinihana biby momba ny poizina sy ny fandalinana amin'ny olombelona izay tsy misy fiatraikany amin'ny dosie izay ampiana matetika. Huperzine-A dia eo am-pitsapana mialoha ny fampiasana amin'ny ady amin'ny Arzheimer Disease koa, a ...
Ny phosphatidylserine, na PS, dia fitambarana mitovy amin'ny tavy fihinana izay miely be amin'ny vatan'ny neural olombelona. Izy io dia azo ampifangaroina ary hohanina amin'ny alàlan'ny sakafo, fa ny tombony fanampiny kosa dia azo alaina amin'ny famenony. Mety hanohana ny fiasan'ny atidoha izany ary hampiroborobo ny toe-tsaina salama ary hanampy ny fahalalana, ny fahatsiarovana ary ny fifantohana. Izy io koa dia mety hanampy amin'ny fiaretana amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fanarenana. -Manohana ny fiasan'ny ati-doha; -Mba mandroso toe-tsaina salama; -Aids fahalalana; -Mahatadidy; -Nasa manampy ny fifantohana; -...
Ny CoQ10 dia singa toy ny vitamina izay vokarina ao amin'ny vatana ho an'ny fiasan'ny mitochondria, ary koa singa iray amin'ny sakafo. Izy io dia manampy ny mitochondria mandritra ny famokarana angovo ary ampahany amin'ny rafitra antioksidanana endogenous. Mitovy amin'ny fitambaran'ny pseudovitamin hafa izy io satria tena ilaina amin'ny fahavelomany, fa tsy voatery ho raisina ho famenony. Na izany aza, mety misy ny tsy fahampiana noho ny aretim-po, ny statins, ny aretina isan-karazany, ny ...